अहिले कलाकारहरुको धमाधम विवाह हुँदैछ । नायीका स्वेता खड्काले हालै विवाह गरिन् । अब गायिका अञ्जु पन्त विवाहको तयारीमा छन् । उनको विवाहको लुगा पनि तयार हुँदै भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यता अर्की गायिका आस्था राउत विवाह गर्ने तयारीमा जुटेकी छिन्।
‘सालको पात टपरी’ को रिमिक्स भर्सन गाएर डेब्यु गरेकी उनले अब करियरसँगै व्यक्तिगत जीवनबारेमा ध्यान दिने बताएकी हुन्। उनी पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित गायीका हुन् । स्पष्ट बोल्ने उनको स्वभावले कहिले काँही उनलाई विवादित बनाएको छ ।
यस्तो अनौठो चलन जहाँ ‘यौ न प्यास मेटाउन’ ३२ रुपैयाँमै युवती किन्न पाइन्छ !
नेपालमा पनि टिकटक ब’न्द हुने स’भावना ! उ’जुरी दिनेको संख्या अ’त्याधिक बढे (टिकटको ब’न्द हुनु ठिक कि बे’ठिक? )
एक्सन स्टार विराज भट्टको धमाकेदार कमब्याक, दमदार एक्सनसहित ‘साङ्लो’ ट्रेलर रिलिज (भिडियो)